Qorfeyn Buug: Dharaaraa Ina Soo Maray - WardheerNews
Qorfeyn Buug: Dharaaraa Ina Soo Maray
W/Q Maxamed Baashe X. Xasan
Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale (Boobe) waxa uu ka mid yahay foolaadka, haddaanu ahayn ba, qofka ugu horreeya ee loogu hagaaggi karo taariikhdii SNM. Waayo waxa uu ahaa inta badan xilligii SNM xoghayn guddi ama xoghaye fulineed, waxanu kale oo uu ahaa nin karti badan oo ‘inta uu cuno ciidansha’, gaar ahaan marka ay qoraal hal-abuurkii iyo kaydin dhacdo timaaddo. Waa aan xusuustaa oo lama arki jirin Boobe oo aan gacanta ku sidan xusuus-qor iyo qalin uu ku gaashaaman yahay. Sidaas buu ku noqday xogogaal wax badan og, wax badanna weeleeya, haddana soo tebinaya. Taas macnaheedu ma aha wax walba oo SNM ku saabsan qoraagu waa uu hayaa ama waa laga ag heli karaa, ama sidii ugu wacnayd ayuu u soo bandhigi karaa inta uu hayo. Wax se hubaal ah in uu wax badan kaydiyey, wax badanna soo gudbiyey, iyada oo tebintiisu u caano shubanaysa tognaansho tayo ahaaneed.
Buuggani waa buug qaro weyn, walwaalaya na xog ka culays badan dhumucdiisa. Waxa uu ka kooban yahay 474 bog. Wuu baallo fidsan yahay ballac ahaan. 98% in ka badan waa sooyaalkii iyo sugantii SNM oo car iyo bey la’. Sida uu qoraagu ba buugga meelo ka mid ah ku sharxay ereyga ‘SUGANTI’ oo ah wixii si rasmi ah qoraal ahaan u galay (Document) ee SNM lahayd ayuu buuggu xambaaray. Xog malaasan iyo kayd dhigaal ah oo macduunka ah oo aan is leeyahay buuggan mooyee meel kale oo loogu hagaaggaa ma jirto ayaa noqonaysa isir Boobe loogu hibayn karo ‘Billad Sharaf’, marka la eego sida uu hawshaas isaga xilsaaray ee uu, ugu horrayn, u kaydiyey dhawr tobanle, mar labaadna isugu dubbaridey qoraal gelinteeda, ka dibna u soo tebiyey buug ahaanteeda dhito iyo dhaxal ahaan.
Waa dedaal naf-hur ah, waxana garan kara qof kasta oo ay buug qoraalkii is muteen, weliba buuggan oo kalena wuu ka sii xagjiraa marka lagu dhereriyo mawduuciisa iyo is diiddooyinkiisa ka dhalan kara dhaqanka hadlaaga ah ee aan daymada weyn u lahayn ama siinnin wixii ‘suganti’ ah, ee ka dab qaata ‘kutirikuteenka’ iyo ‘wax la yidhi’. SNM ma aha hadda isir jira oo horteenna yaalla. Waa wax tegey iyo taariikh. In sooyaalkeedii suganti ku saabsan la helaa waa iftiin wax laga baran karo. Wixii sugan ee laga heli karaa waa sahay loogu sahan tegi karo in kale oo ku kala filiqsan maskaxo kale. Buuggani jidkaas buu furayaa.
Buuggu waxa uu, sidaas si la mid ah, u soo tebinayaa ‘sugantii’ qaab dhismeedka ururka SNM guddiyadiisa fulinta, golaha dhexe iyo guddida joogtada ah, iyo waajibkoodii xilgudasho, xeerarkii iyo xaagaantoodii (xeer hoosaadkoodii). Waxa kale oo kuwaas raacaya oo buuggu soo bandhigayaa barnaamijkii siyaasadeed iyo dastuurradii ururkii Dhaqdhaqaaqa Waddaniga Soomaaliyeed (SNM) oo ‘suganta’ ugu macduunsan ahayd, lagana halacsan karo mabaadidii iyo waxa ay SNM u taagnayd. Saxantii iyo dhalliishii SNM, labadu ba, iyaga oo ka badan biyaha gu’gii gala galalka Ciideed waxa laga la soo dhex bixi karaa dhawrkaas ‘Suganti’ ama ‘Document’ ee buuggu xanbaaray oo aan anigu qof ahaan u arko godanka, obocda iyo biyo-culusta buuggan.
1. Dhagaxtuurkii Ardayda ee Feb 1982.
2. Hawl-galkii Badbaado ee jebintii xabsiga Mandheera ee Jan 1983.
Mudanta Hawl-gallada SNM, waa run, oo kuwani waa ka mid marka laga yimaaddo Gadoodkii Ardayda oo ka madax bannaanaa hawl-gallada SNM, kuna saabsanaa oo ka kacay xadhiggii Dhallinyaradii UFFO. Labada hawl-gal ee jeelka Mandheera iyo Miiska Saraakiishu waxa ay SNM u soo hooyeen sumcad siyaasadeed iyo tu milateri oo weyn.
Kulamadii SNM iyo ergadii Garaad Cabdilqani iyo natiijooyinkii ka dhashay ayaa mawduuc kale oo buuggu wax ka taabtay ah, xiiso na leh. Kaas waxa la mid ah mawduuca kale ee muhiimka ahaa ee isna la xidhiidha heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee SNM, USC iyo SPM oo isna ‘Sugantisii’, ‘Document-kiisii” qoraagu inagu soorayo.
Buugga waxa kale oo qayb ka ah booqashooyin qoraagu wufuuddii u baxday uu ka mid ahaa oo lagu tegey saddex aag ciidameed oo SNM ka koobnayd 1986. Waxa aan qaybtan u arkay ta ugu liidata buuggan, wax na u dhimaysa xiisihii iyo sahii buugga lagu akhriyi lahaa. Meelo hore ayay qaybtu ka jirtaa (bogagga 157 – 186). Marka aad qaybtan akhriyayso waxa kugu dhacaya caajis badan. Waa aad hamaansanaysaa. Dhawr goor marka aad buugga iska laabto, waxa kugu soo dhacaysa dib ba ha u kala furin, haddii aanu jirin hir kale oo kuu muuqda oo aad higsanayso gaadhiddiisa.
Malahayga waxa qummanayd in aan 29 bog booqasho qaabkaas ah lagu sii deyn ee lagu koobo tobaneeyo bog. Haddii laga tegi waayo xog ku saabsan degaannada iyo dhulka, waa laga mudan karaa sharaxa badan ee booqashooyinka oo muhiim noqon lahaa haddii xoogga qoraagu saaro nuxurkoodii dooddo iyo natiijooyin ahaan ba.
Qoraagu isaga oo hawl culus ka soo dhalaalay oo inta badan ee waxtarka leh ee uu soo bandhigay ay u buuxinayaan inta yar ee la odhan karo ama u muuqan karta goldaloolo aan ereyo ku soo koobo intii aniga buugga iiga soo baxday. Booqashadaas aagagga marka la yimaaddo, waxa aan xusi lahaa dhawr qodob oo aan uga gol leeyahay in dib loo eego daabacaadda labaad ee buuggan qiimaha leh:
2. Farta ‘hayska’ leh ama ‘janjeedhka’ leh ee ‘italics’ loo yaqaan oo buugga aad ugu badan oo mararka qaar dhawr bog isku wadhaysa in xal kale loo helaa ila qumman daabacadda labaad, waayo xawliga iyo xiisaha akhriska ayay yaraynaysaa, weliba dadka waaweyn, sidayda oo kale.
3. Qoraagu waxa uu Kornayl Sheekh Yarow ku duray wax kornayl kasta oo SNM ahaa uu Sheekha la wadaagi karo. Sheekh Yarow waa aasaasihii Aagga Koonfureed ee SNM. Dabayaaqadii 1983 ama horraantii 1984 midkood ayaan anigu ugu tegey Suufti oo ku dhacda meel u muuqata xadka Mandheera ee Kenya iyo Buulo Xaawo oo Soomaaliya ah.
Suufti oo dhanka Itoobiya raacsan, Doolow iyo Buur Aaminow ayuu Sheekhu saldhigyo SNM ka mid ah ka yagleelay, Col Aadan Saleebaan Cali, AHN iyo aniguna ugu tagnay. Anigu Radio Halgan baan ka socdey. Marar kale oo badnaa xafiiskii Addis Ababa ayuu Sheekh Yarow noogu yimi oo waraysiyo idaacadda ka baxay aan kaga qaadnay. Waxa uu ahaa nin dhulka u dhow oo af gaaban. Ma hubo in uu nool yahay iyo in uu hadda mootan yahay. Boobe waxa uu Sheekh Yarow ku eedeeyey, isaga oo weli ba aqoontiisa qofnimo liidaya, in uu reerkooda isaga oo u hiilinaya dagaal ka ridey Kenya gudaheeda oo ciidamo geliyey. Waa suurto gal oo Digoodi xuduudda saddexda waddan ba (Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya) waa ay u kala gudbaan xilliga hillaac raaca.
Maxamed Siyaad Barre haddii uu reero jiidahaas wada dega mid soo hubeeyey oo mid uu mucaaridnimo ka ururiyey ku duqeeyey saw taasiba Aaggii Waqooyi iyo Itoobiya gudaheeda kama dhici jirin oo SNM ciidamadeedu gacan ma siin jirin qabaa’ilkii taageersanaa ee qabaa’ilka kale lagu soo soofeeyey. Arintan oo labada jeer ba “Aagga Koonfur iyo ka Waqooyi”, waxa la iska difaacayaa isku mid bay ahaayeen (Xukuumaddii Maxamed Siyaad oo dagaallo beeleed xabbadda mucaaridka iskaga gudbaysa), oo beeshii SNM si uun maalin u taageerta lagu soo hubeeyey beeshii/ beelihii kale ee ay ood-wadaagta ahaayeen ee Itoobiya ama Kenya xuduudaha ku teedsanaa.
Khalad iyo sax kii ay noqotaba waa loo gudboonaa falcelintii SNM ee isku midka ahayd Waqooyi iyo Koonfur-ba haddii wax ka dhaceen Kenya ama Itoobiya, waayo dagaal siyaasadeed oo beelaha la isla dhex galay ayaa dhacayey.Taas awgeed, Kornayl Sheekh Yarow kelidii arrintaasi gaar uma qabato, waxanan u arkay in ay buuggan macdanta ah fongor ku tahay.
Mar dambe laftaydu waxa la i xusuusiyey in xadhigga Cabdillaahi Yuusuf ahaa 1986. Sannadkii 1985 ayaa khilaafkii SSDF oo hoggaaminta ku saabsanaa cirka isku shareeray. Cabdiraxmaan Caydiid iyo Iikar Maxamed Xuseen oo ka mid ahaa madaxda SSDF ayaa shirqool lagu diley. Ka dib ayaa la xidhay Cabdillaahi Yuusuf.
Runtii waa taas ta is burinta iigu muuqataa ee buuggan miisaanka leh aan u qalmin ee fongorta ku ah.
5. Gabay Qaasim lahaa oo uu qoraagu hal sadar ka soo qaatay ayaa isna u dhignaa;
‘Addis Ababa gee baan lahaa ayda doogga leh’.
Cabdillaahi Wadhafit markii hore waxa uu ka yimid Maxamed Siyaad Barre, oo waxa uu u yimid Cabdillaahi Yuusuf, haddana waxa uu ku noqday Maxamed Siyaad sidaas buu Boobe Yuusuf u dhigayaa sababta halkudheggani ku yimi.
Maxamed Siyaad buu ka yimi sida Cabdillaahi Wadhafit. SSDF buu ku geli waayey oo ka yimi sidoo kale. Maxamed Siyaad-se kuma uu noqon oo SNM buu u yimi. Wuu ku geli waayey sidii SSDF. Maxamed Siyaad ku ma uu noqon sidii Wadhafit ee waxa uu ku ciil burburay oo Markaas yidhi, baa la yidhi:
Darroor oo muddo bil ku dhow aannu joogney waxa xilligaas ka furnaa saldhig ciidameed oo weyn. Maxamed Cali Faarax. AHN, ayaa joogey. Xero magaalada ka go’an oo dhinaca waqooyi galbeed kaga qumman ayuu saldhiggu ahaa. Ciidamo hubkooda fududi u dhan yahay ayaa rigli ama rasmi ku ahaa, halka meelaha kale abaabullo xooggani ka socdeen. Inta u dhaxaysa Baalidhaye iyo Darroor gaadhi baannu ku marnay. Darroor iyo Xarshinna waa aannu u kala lugaynay. Laba habeen baannu Rabaso iyo Kaam Haashin ku sii kala nasannay. Rabaso waxa abaabul ciidan ka wadey Shakiib Cabdilqaadir, AHN, iyo Jacfar Ismaaciil Bootaan oo aannu Hargeysa isku naqaanney, nolol na aan kaga warhayo.
Laga yaabee in qorshihii maamul ee ururku ahaa in saldhigyo laga sameeyo goobahaas sidii markii dambeba ka dhaqanka gashay, markaas aannu SNM nimi-na abaabulkeedu xoogga u socdey.
Dhinaca qaabqoraalka buugga, marka loo eego buuggaagta Soomaalidu soo saarto waa uu ka badbaadey khaladaad badan oo kugu soo noqnoqda marka aad akhriyeyso, waa ay se jiraan meelo u baahan in loo saxar tiraa.
Magaca buugga ee “Dharaaraa Ina Soo Maray” dad badan baa ka hadlay sida uu u yaallo oo ah si aan habqoraalka toolmoon waafaqayn. Ereyo kale oo buugga ku soo noqnoqonaya ayaa taas la mid ah sida caadiya, sharciya, dastuuriya, rasmiya iwm. Waxa loo baahnaa in ereyadaas loo qoro sidan: caadi ah, sharci ah IWM.
Buuggani in farsamo ahaan dib loo egaa waa muhiim, meelaha iigu muuqday in laaxin ku jiro ee aan wax ka tilmaamay-na in dib loo dhugtaa waa wanaag kale, nuxur ahaan se xogta buuggu sidaa waa rib iyo ruud malaasan oo macduun ah. Sidii aan hortebyada ku sii carrabbaabay waa dhaxal weyn oo wax badan laga baran karo, tixraac badanna laga magansan karo marti ahaan.
Buuggu waxa kale oo uu wax u tarayaa axsaabta siyaasadda oo ka faa’iidaysan karta sidii SNM ula falgashay dimuqraaddiyadda, xeerarka, barnaamijyada siyaasaddeed, dastuurrada iyo qaabdhismeedka guddiyada iyo hannaanka shirarka.
Ugu dambayn aan bogaadiyo Boobe Yuusuf Ducaale oo aan qiyaasi karo, dareemayo-na duruufta isaga qof ahaan u gaarka ah ee ag taalla iyo ta guud ee uu buuggan ku dhex qoray-ba. Xil weyn buu inaga wada dul qaaday, jid dhiirrasho leh-na waa uu inoo laangooyey.
Boobe waa uu ka midho dhaliyey hadafkii uu buuggan ka lahaa iyo kaydkii uu inta badan tacabka gelinayey mar haddii uu isa soo dhaafiyey. Nimay ku hadhay hawli haysaa, iyada oo sooyaalkaas dhinacyo kale- na laga eegi karo maanta, buugguna uu taas badhitaar weyn u noqonayo xigasho ka dhigasho iyo xusuus soofayn ba.
Buugga waxa daabacday shirkadda waddaniga ah ee Sagaljet. Bogaadin.Maxamed Baashe Xaaji Xasan